Nyamesom | Nea Bible Ka
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Adɛn nti na asɔre bebree wɔ hɔ saa?
“Moagyaa Onyankopɔn mmara mu, na mukura nnipa atetesɛm mu.”—Marko 7:8.
Onipa biara wɔ atenka bi wɔ ne mu sɛ ɔbɛsom Onyankopɔn. (Mateo 5:3) Saa atenka no nti nnipa atetew asɔre bebree; ɛnyɛ sɛnea Onyankopɔn pɛ, na mmom egyina onipa adwene so.
Ná nyamesom kuw bi wɔ asomafo no bere so, na Bible ka wɔn ho asɛm sɛ: “Wɔwɔ Onyankopɔn ho nnamyɛ de, nanso ɛnyɛ nokware nimdeɛ mu; na esiane sɛ wonnim Onyankopɔn trenee na mmom wɔpɛ sɛ wɔde wɔn ankasa de si hɔ nti, wɔammrɛ wɔn ho ase anhyɛ Onyankopɔn trenee ase.” (Romafo 10:2, 3) Ɛnnɛ nso asɔre pii wɔ hɔ a “wɔkyerɛkyerɛ nnipa ahyɛde.”—Marko 7:7.
Ehia sɛ obiara kɔ asɔre?
“Momma yensusuw yɛn ho yɛn ho ho, nkanyan yɛn ho yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu, na mommma yɛnnkwati sɛ yɛne yɛn ho behyiam.”—Hebrifo 10:24, 25.
Hebrifo 10:25 ka asɛm bi sɛ, “mommma yɛnnkwati sɛ yɛne yɛn ho behyiam.” Saa asɛm no kyerɛ sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ nnipa a wɔwɔ ɔsom baako mu hyia mu som. Nanso saa nnipa a wɔabehyia no, wugye di sɛ ɛsono obiara ntease wɔ Onyankopɔn ho anaa ɛsono nea obiara kyerɛ sɛ Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛyɛ? Dabi. Bible kyerɛ sɛ, wɔn a wɔsom Onyankopɔn sɛnea ɔpɛ no, ɛsɛ sɛ wɔn ‘nyinaa yɛ nokoro na wɔka bom denneennen, adwenkoro ne nsusuwii koro mu.’ (1 Korintofo 1:10) Wɔbɛhyehyɛ wɔn ayɛ wɔn asafo asafo na ‘wɔbɛdodɔ anuanom a wɔwɔ wiase nyinaa.’ (1 Petro 2:17; 1 Korintofo 11:16) Sɛ yɛbɛsɔ Onyankopɔn ani a, ehia sɛ yɛka bom de baakoyɛ som no.
Enti yebetumi ahu asɔre a ɛyɛ nokware?
“Sɛ mododɔ mo ho a, ɛno na ɛbɛma nnipa nyinaa ahu sɛ moyɛ m’asuafo ampa.”—Yohane 13:35.
Bible ka wɔn a wɔn asɔre yɛ nokware no ho asɛm sɛ: “Wɔn aba na mode behu wɔn. Wɔtetew bobe wɔ nsɔe so, anaasɛ wɔtete borɔdɔma wɔ ohwirom so?” (Mateo 7:16) Enhia sɛ wusua nnua ho ade ansa na woahu sɛ dua bi yɛ borɔdɔma anaasɛ ohwirom; enhia sɛ wunya nyamesom ho nimdeɛ bebree ansa na woahu sɛ asɔre bi yɛ nokware anaa ɛnyɛ nokware. Nneɛma bɛn na ɛbɛma yɛahu sɛ asɔre bi yɛ nokware?
Asɔre a ɛyɛ nokware no nkyerɛkyerɛ nyinaa fi Onyankopɔn Asɛm Bible mu. (Yohane 4:24; 17:17) Ennyina nnipa nyansa so.
Asɔre a ɛyɛ nokware no boa nnipa ma wohu Nyankopɔn, na ɛma wohu ne din, Yehowa no nso.—Yohane 17:3, 6.
Asɔre a ɛyɛ nokware ma yenya anidaso wɔ Onyankopɔn Ahenni mu, ɛnyɛ wiase atumfoɔ.—Mateo 10:7; 24:14.
Asɔre a ɛyɛ nokware kyerɛ yɛn sɛ yɛnnodɔ yɛn ho. (Yohane 13:35) Ɛkyerɛkyerɛ sɛ nnipa nyinaa som bo; ɛkyerɛkyerɛ sɛ yɛmfa yɛn bere ne yɛn ahode mmoa nkurɔfo; ɛkyerɛkyerɛ sɛ yɛntwe yɛn ho mfi akokoakoko a ɛwɔ wiase no ho.—Mika 4:1-4.
Asɔre a ɛyɛ nokware deɛ, emufo de nea wɔka bɔ wɔn bra biribiara mu; wɔnkɔ asɔre kɛkɛ.—Romafo 2:21; 1 Yohane 3:18.
Yehowa Adansefo na wotintim nhoma yi; wɔbɔ wɔn ho mmɔden de wɔn kasa ne wɔn abrabɔ hyɛ Onyankopɔn anuonyam. Adɛn nti na wonkɔ Ahenni Asa bi so nkɔhwɛ sɛ nea yɛreka no wom ampa a?
Enti Yehowa Adansefo Yɛ Kristofo?
Yɛsrɛ wo, kenkan na hu sɛ yɛyɛ soronko wɔ asɔre ahorow a wobu wɔn ho Kristofo no ho.